Dooddii siyaasadeed ee dalka ayaa codad badan soo jiidatey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ragnar Persenius wadaadka sare ee kaniisadda Uppsala stift iyo natiijadii doorashada. sawir: Claudio Bresciani/TT och Petra Lindell / TT.
Dooddii siyaasadeed ee dalka ayaa codad badan soo jiidatey
Persenius: "lama siyaasadeyn kaniisadda"
La daabacay måndag 18 september 2017 kl 17.49
Dooddii siyaasadeed ee ka taagnayd dalka waxay sabab u noqotay iney dad badani codkooda dhiibtaan, sida uu sheegay Ragnar Persenius, ahna wadaadka sare ee kaniisadda Uppsala.
Waxey sidoo kale guulo ka raaceen doorashadii kaniisadda ee sannadka xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka.
Tiro kor u dhaafaysa 18% ayaa codkooda ka dhiibtey doorashadii goleyaasha ee kaniisadda Sweden. Waana tiradii ugu badnayd muddo 57 sannadood laga joogo.
–Waa tallaabo lagu farxo inay doorashadu ka kacday 12.8% illaa iyo 18,22% sida ay u muuqato, sida ay sheegtay hoggaamiyaha doorashada kaniisadda Sweden Anki Bondesson.
Sannadka ayay ku cusbayd in horey loo codeeyn karo laga soo bilaabo 4-tii sebteembar, sidoo kale waxaa laga codeeyn karey tiro ka badan 1600 goobood, kolka loo barbar dhigo doorashadii ka horreeysay ee 2013.
Xisbiga Socialdemokraterna ayaa sidii horeyba u ahaa ugu cod badan xubnaha golaha sare ee kaniisadda - Kyrkomötet hase yeeshee waxaa sida ugu wanaag-san ugu guuleeystay xisbiyada Centerpartiet iyo Sverigedemokraterna. Waxaa sidoo kale ay guulo ku raacday kooxda lagu magacaabo Posk iyo bidixda kaniisadda Sweden.
Hase yeeshee waxaa gacan ka geeystay kor u kaca cod-bixiyeyaasha dooddii siyaasadeed, sida uu sheegay Ragnar Persenius wadaadka guud ee Uppsala stift. Saxaafadda ayaa xoogga saartay guusha xisbiga Sverigedemokraterna. Iyada oo xisbigu kor u kacay 3%, gaareyna 9%.
–Waxey lahaayeen taageereyaal ey kiciyeen oo u codeeyey, dhanka kale waxaa jirey qaar kale oo guul ka soo hoyey, sida kooxda bidixda kaniisadda oo aan xisbiga ku xirneyn, qaar badan oo u heeystey iney guul ka ballaaran ka gaari doonaan, hase yeeshee ey muuqatey in aaney guushu ballaarneyn, sida uu sheegay Ragnar Persenius.
Doorashada horteed ayuu xisbiga SD ku dhawaaqay in kaniisaddu noqotay mid siyaasadeey-san. Waana mid aannu Persenius ku raacsanayn.
–Waxa la dooneyo waa in aanay kaniisaddu ka howl-gelin bulshada dhexdeeda. Lama dooneyo in kaniisaddu aanay ka jawaab celin cawaaqibta caqiidadeeda iyo aaminkeeda. Macnaheedu maahan haddaba in kaniisadda Sweden la siyaasadeeyey sida ay sheegeyaan xisbiga Sverigedemokraterna.